Nkọwapụta Ezviz CTQ3W, igwefoto onyunyo WiFi | Gam akporosis
Anyị enwebeghị igwefoto onyunyo ọhụrụ n’aka anyị kemgbe ogologo oge. N'oge a, site n'aka ụlọ ọrụ Ezviz, anyị na-enweta CTQ3W. Otu Igwefoto onyunyo wifi emere maka n'èzí na arụmọrụ dị elu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ onyunyo igwefoto nke na-eme ka ị nwee nchebe n'ụlọ. Ma ọ bụ na ị na-eche iku iku mkpu ma ị gaghị akwụli ya. Ezviz na-enye anyị nnukwu ihe ọzọ maka nchekwa ụlọ na-enweghị mkpa ụgwọ ọnwa ma ọ bụ na-adịgide adịgide. Echefula nyocha nke igwefoto maka ụlọ nke na-akwado ihe niile na ekele maka nanị coupon nwere ike ịbụ nke gị ọbụna dị ọnụ ala.
1 Ezigbo, akpaaka ụlọ n'ime onye ọ bụla ruru
2 Nhazi na ọdịdị ahụ
3 Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ maka nchekwa gị
5 Ngwa nke na - eme ka igwefoto ka mma
Ezigbo, akpaaka ụlọ n'ime onye ọ bụla ruru
A afọ ole na ole gara aga, mgbe anyị hụrụ ihe ụlọ ndị ga-eme n'ọdịnihu nwere ike ịbụ na akpaaka ụlọ, ọ dị ka eziokwu dị anya. Mana dika anyi huru, o dighi otu a. Ezigbo ụlọ ndị bụbu eziokwu. Na nke kachasị mma bụ na ị nwere "eHome" na-adịwanye ọnụ. Ọ bụrụ n’ikpebie na ịchọghị ichere ọzọ Lee ị nwere ike ịzụta igwefoto EZVIZ CTQ3W ugbu a na Amazon. Na iji koodu ntinye ego EZVIZCAM Dị irè ruo 29/05 ị ga-enweta mbelata ego pụrụ iche.
N'ihi ngwaọrụ dị ka smart ọkà okwu ya na ndi enyemaka olu. Bulbs na oriọna ya na wifi. Plọg na Ngwa anyị nwere ike ijikwa na smartphone. Na ngwaọrụ niile jikọtara ọnụ n'ụlọ. Oge ọ bụla ọ na-enyo Ọ ga-adịrị mfe ịnweta ụlọ obibi.
Igwe onyunyo na-abata mezue netwọk nke ngwaọrụ ejikọrọ n'ụlọ. N'ihi njikọ Wi-Fi ha, na ohere ha na-enye, ha ghọrọ otu n'ime usoro nchekwa kachasị nchebe nke oge a. Ọbụlagodi na ịnọghị n ’ụlọ gị, ị ga-enwe anya na ntị n’ime na mpụga ya.
Eziviz anọwo na-enye ahịa, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, ngwaahịa metụtara igwe onyunyo, ihe mmetụta ma ọ bụ ihe mmeghe ụzọ. Ngwa dị mkpa iji chebe ụlọ anyị. Na onye obula ngwaahịa ya kwụpụtara maka inye mmekọrịta pụrụ iche n'etiti ogo na ọnụahịa.
Nhazi na ọdịdị ahụ
Igwefoto onyunyo Ezviz nwere ihe eji eme ya ahịrị gbara gburugburu nke ahụ ga-adaba nke ọma n'akụkụ ọ bụla nke ihu ụlọ gị. Ezubere iji gbochie ebili mmiri, O nwere ihe ndozi nke mere na ị nwere ike ịchọta ya na mpaghara ahụ na akụkụ nlele kachasị mma. N’ụzọ dị otu a, ị ga - enwe ike ijikwa onye batara ma ọ bụ pụọ n’ụlọ oge niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụlọ dị mma na ọnụahịa kachasị mma, echekwala ọzọ, na zụta igwefoto EZVIZ CTQ3W ugbu a site na Amazon. Echefukwala iji koodu ntinye ego: EZVIZCAM dị irè ruo Mee 29.
Ọ bụ ihe na-emesi obi ike ịmara na Ezviz na-enye igwefoto onyunyo a n'èzí nwere atụmatụ zuru oke iji nagide ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ. Daalụ nke gị Asambodo IP66 mmiri ozuzo ma ọ bụ snow agaghị abụ nsogbu. Ihe owuwu ya na-enye iguzogide okpomọkụ site na -30º ruo 60º. O nwekwara ike inweta onyonyo di nkọ nke ruru 95% iru mmiri na-enweghi odide na onyonyo a.
Mpaghara ebe lens dị nwere ọdịdị oval. Na n'ihu bụ oghere na-enye Ndekọ 720p HD. Na nsọtụ ya o nwere poolu abụọ ka njikọ Wi-Fi wee kwụsie ike n'oge niile. Na akụkụ ala ya ọ nwere, n'otu akụkụ ya na igwe okwu, na ntakịrị n'ihu na ọkà okwu dị ike. N'ihi ihe ndị a, Ezviz CTQ3W ka ukwuu ikwere ngwaọrụ ndị ọbịa achọghị.
Ibe nke oval nwere ebe igwefoto di 360º na-agagharị agagharị. Ozugbo etinyere na mgbidi ahụ, nke anyị nwere ihe eji eme ihe nwere kposara, anyị nwere ike ịkwaga ya dị ka mkpa anyị si kpuchie otu ma ọ bụ n'akụkụ nlele ọzọ.
Zụta igwefoto onyunyo kacha mma na ọnụahịa kacha mma na Amazon
Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ maka nchekwa gị
Ezviz's Lea CTQ3W igwefoto echebere nke ọma iji chekwaa ihe kachasị anyị mkpa, ụlọ anyị. Iji mee nke a, na mgbakwunye na nyochaa ya 24 awa kwa ụbọchị, ọ bụ eji ihe mgbochi nke ahụ ga-enyere aka igbochi ndị enyi na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Ezviz anyị achọpụta ihe na-enyo anyị enyo, iji chụpụ ndị na-achọghị ụlọ, ha na-etinye “ngwa agha” ha niile n'ọrụ.
Ekele dịrị ọkà okwu ya, igwefoto onyunyo Ezviz na-eweputa oti mkpu nke ahụ ga-eme ka ndị agbata obi na ndị ji ụkwụ jee ije mara na ihe adịghị mma. Jaa nke ahụ esịmde 100 dB, nke ya na Ọkụ ọkụ ọkụ, ọ ga-eme ka ndị omekome ghara ịnọ n’ụlọ anyị. Mgbakwunye nchebe nke na-eme ka anyị nwee mmetụta nke nchebe karịa.
Ezviz CTQ3W ọ na-enye anyị nlekọta dị irè n'abalị. N'ihi otu oru oma ọkụ infrared na ogwe mgbochi na-atụgharị uche ime ụlọ a dị n'èzí na-enye ezigbo ohere ọhụụ abalị ruo mita iri atọ. Nchọpụta ọkụ na-akpaghị aka ga-eme ka anyị ghara ịlafu nkọwa na oyiyi ọ bụla, ọbụlagodi na gburugburu ọchịchịrị.
El usoro ọdịyo abụọ nke ejiri kwadebere ya na-enye anyị ọrụ karịa. Anyị ga-enwe ike ịhụ onye nọ n’ọnụ ụzọ anyị, site na Ngwa ahụ, anyị nwere ike ịza ha okwu n’igwe okwu. N'otu ụzọ ahụ ha ga-esi jiri igwe okwu gwa anyị okwu. Dị ka a ga - asị na anyị na - ekwu okwu na intercom mana n'agbanyeghị etu anyị si nọrọ n'ụlọ.
Ndekọ HD na 720p
Ọkụ ọkụ SI
Nchekwa ebe obibi OBU
Oghere kaadị ebe nchekwa Micro SD
Mmiri eguzogide ọgwụ Asambodo IP66
Ibu ibu 581 g
Akụkụ 15 x 7.2 x 7.2
Ahịa 59.99 €
Linkzụta njikọ EZVIZ CTQ3W
Koodu ego EZVIZCAM (dị irè ruo Mee 29)
Ngwa nke na - eme ka igwefoto ka mma
Na mgbakwunye na njirimara nke Ezviz CTQ3W kwadebere, inwe a ngwá ọrụ dị ka nanị ngwa na-eme ka ọ ka mma. Ngwa emere ka nke ahụ ojiji nke igwefoto -adị mfe ma na-arụpụta ọbụna ịrụ ọrụ karịa. a omenala-wuru software nke mkpa onye ọrụ.
Su ngwa, n'efu na dakọtara maka gam akporo na iOS, awade a otutu nhọrọ. Ojiji nke igwefoto onyunyo anyi diri onye obula na-enweghị mkpa maka tupu ihe ọmụma. Emebere igwefoto Ezviz n'ụzọ zuru ezu mmekọrịta mmekọrịta ya na ngwasite na nke anyị pụrụ ịhụ ụzọ, nụ ihe, ọbụnakwa kwuo okwu.
Developer: Ụlọ ọrụ EZVIZ INC.
Mgbe ị nwesịrị ịnwale ya maka ụbọchị ole na ole, ọ bụ oge ịgwa gị ihe anyị chere banyere igwefoto onyunyo a. N'ozuzu, na dị ka anyị na-agwa gị, ọ dị anyị ka ihe nchekwa nchekwa dị mkpa. Ezlọ ọrụ Ezviz na-enye anyị ngwaahịa nke ezigbo mma na ọnụahịa dị oke ọnụ.
Mana dị ka ngwaahịa niile anyị nwalere, anyị hụrụ akụkụ ụfọdụ nwere ike ịme ka mma. Anyị na-emekwa ka ndị masịrị anyị karịa. Yabụ ndị a bụ uru na ọghọm anyị. O buru na ikwenyesiri ike ma gi kpebie izu Ezviz CTQ3W cheta na rue mgbe 29/05 i gha enwe ego site n’iji koodu ahu. EZVIZCAM mgbe ị na-etinye iwu gị na Amazon.
Nhazi oge a nwere akara oval na-adọrọ adọrọ n'anya.
Iwu siri ike nwere ihe na-eguzogide ọgwụ nwere ike iguzogide ọnọdụ ihu igwe dị oke egwu.
Ngwa zuru oke nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe iji.
Igwefoto mmekọrịta mmekọrịta maka igwe okwu na ndị ọkà okwu.
Oti mkpu na ụda na-egbochi nke na-eme ka o kwe omume ịchụpụ ndị omempụ na mgbakwunye na ịhụ.
Nchọpụta na-adọrọ adọrọ na nke dị ugbu a
Ihe na-eguzogide ihe niile
Ngwa zuru ezu
Mic na ọkà okwu mmekọrịta
Ìhè na ụda mkpu
O nweghi batrị n'ime ya nke na - eme ka ọ bụrụ ihe nrụnye nke arụnyere ozugbo anyị agaghị enwe ike ịgbanwe ọnọdụ ya.
Nwụnye mkpa na Gịnị.
O nweghi moto ngaghari. Ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịkwaga ya, ozugbo edozi ya, anyị agaghị enwe ike ịgbagharị elele na ngwa ahụ.
Enweghị batrị batrị
Ntinye dị mkpa
Adịghị eji moto
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Analysis Ezviz CTQ3W, igwefoto onyunyo wifi
Nintendo na-echeta Fire Emblem na Animal ịgafe si Belgium ahịa maka Loot igbe